Kullamadii laga ciyaarray horyaalka Ingiriiska iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Kullamadii laga ciyaarray horyaalka Ingiriiska iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay.
Axad, November, 25, 2018(HNN) West Ham United 0-4 Manchester City
Man City waa kooxdii labaad ee aan ka dhisneyn London, isla markaasna London ku gaarta lix guul oo xiriir ah ka dib Portsmouth oo lix guul xiriir ah ku gaartal caasimadda England.
Tan iyo xilli ciyaareedkii hore bilawgiisii, ma jiro ciyaaryahan ka badan Leroy Sane oo hal kullan goolna caawiya, goolna dhaliya, keliya Mohamed Salah ayaa la siman oo ay min toddobo ciyaar sidaas sameeyeen.
Man City ayaa noqotay kooxdii labaad ee hal koox garoonkeeda kaga soo adkaata afar gool iyo wax ka badan ah, horayna Chelsea ayaa Bolton iyadoo bannaanka kula soo ciyaartay kusoo garaacday afar gool iyo ka badan afar kullan oo xiriir ah.
Crystal Palace ayaa garoonka Old Trafford markii ugu horreysay taariikhdeeda dhibic kusoo heshay.
Mohamed Salah ayaa dhaliyay 41% goolasha Liverpool ee Premier League-ga tan iyo xukunka Jurgen Klopp, waxaana uu dhaliyay 49 ka mid ah 119 gool.
Roberto Firmino ayaa shan gool ka dhaliyay saddex koox oo kala duwan oo ka tirsan Premier League, waxaana ay kala yihiin Arsenal, Swansea iyo Watford.
Jordan Henderson ayaa cassaan loo taagay mar kale, tan iyo April 2014 kullan Reds ay la ciyaartay Manchester City.
Trent Alexandre-Arnold ayaa afar gool u dhaliyay Liverpool dhammaan tartamada, laba ka mid ahna waxa ay yihiin laadad xor ah oo toos ah.
Dele Alli ayaa Chelsea ka dhaliyay lix gool dhammaan tartamada, waana kooxda uu ka dhaliyay goolasha ugu badan.
Christian Eriksen ayaa caawiyay caawintii 52-aad ee Premier League, waxaana uu ka sara-maray Mesut Ozil oo 51-gool caawiye ka ahaa.
Spurs waxa ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee saddex gool ka dhalisay Chelsea tan iyo markii uu kooxdan macallin u noqday Maurizio Sarri.
Harry Kane ayaa dhaliyay goolkii ugu horreeyay ee uu bannaanka diilinta ganaaxa ka dhaliyay xilli ciyaareedkan oo dhan. sidoo kale goolkii 25-aad ayuu ka dhaliyay kullamada Premier League ee Derby-ga London.
Kullamadii laga ciyaarray horyaalka Ingiriiska iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay. added by admin on November 25, 2018